realme C3 First Impression - PX
realme C3 First Impression
ခက်တော့လည်းခက်သားဗျ။ တစ်ချို့အရာတွေက ဈေးသင့်တင့်တယ်ဆိုတိုင်းလည်း လူကြိုက်များတာ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီအရာဟာ ဘယ်လိုနေနေ တန်တယ်ဆိုပြီးယူဆတတ်ကြပြန်ရော။ ဆိုတော့ ဒီ Article က Entry Level Smartphone တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ realme C3 ကို လက်ထဲရောက်ခါစ ကိုင်ကြည့်မိချိန်မှာ ကိုယ်တွေကြိုက်မိတဲ့ အချက်တွေလို့ပြောရင် ပိုမှန်မယ်။ ကောင်း မကောင်း၊ တန် မတန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကိုတော့ ပရိတ်သတ်ရဲ့တာဝန်လို့ မှတ်ယူလိုက်ပါ့မယ်။
realme C3 ကို အနီ၊ အပြာ အရောင်နှစ်မျိုးရွေးချယ်နိုင်ပြီး 32/2 GB ကို မြန်မာငွေ ၁၆၉,၉၀၀ ကျပ် နဲ့ 32/3 GB ကိုတော့ မြန်မာငွေ ၁၉၉,၉၀၀ ကျပ် အသီးသီးကျသင့်မှာပါ။
realme C3 ကို စပြီးကောက်ကိုင်ချိန်မှာ ပထမဆုံး Impressed ဖြစ်မိတဲ့ အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။ တစ်ချက်က သူ့ရဲ့ Color ပါ။ Sunshine Gradient လို့ပြောရမလား? ကျောဘက်အပေါ်ဆုံး Camera ကနေ ရောင်စဉ်ဖြာထွက်နေတဲ့ Style နဲ့ ရောင်ပြေးလေးလုပ်ထားတာက Unique ဖြစ်သလို လှလည်းလှတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သူ့ Texture. ကျောဘက် Plastic Back ပေါ်မှာ ဖော်ထားတဲ့ လိုင်းလေးတွေက လက်သည်းနဲ့ခြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့အခါမှာ သမရိုးကျ Plastic တွလို ပြောင်ချောချောဖြစ်မနေပဲ လက်ထဲပိုမြဲ၊ ပိုမိုက်တဲ့ Feel ကို ရတယ်။
နောက်ပြီး အဲဒီ Texture ကြောင့် Glossy Plastic, Glass တွေလို ခဏကိုင်လိုက်ရင် လက်ဗွေဗလပွနဲ့ ကျန်နေခဲ့မှာမျိုး စိတ်မပူရသလို အပွန်းအစင်းလည်း ထင်ဖို့သိပ်မလွယ်တာဆိုတော့ Cover မတပ်ပဲ ကိုင်နိုင်၊ ကိုင်ပျော်တဲ့ Confidence မျိုး အပြည့်အဝရတယ်။ တခြား Mid-range Smartphone တွအနေနဲ့လည်း Glossy Plastic တွေ၊ Gorilla Glass Model အဟောင်းတွေအစား ဒီ Trend ကို လိုက်သင့်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။ (Just my honest opinion.)
realme C3 ကို Power စဖွင့်တော့ တတိယမ္ပိ သဘောကျမိပြန်တဲ့အချက်က သူ့ရဲ့ Haptic ပါ။ Boot Logo တက်လာချိန်မှာ တုန်သွားတဲ့ Vibration က Entry Level မှာ တွေ့ရခဲတဲ့ Feedback မျိုးပါ။ Premium Mid-range နဲ့တော့ ယှဉ်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် သူ့ထက်ဈေးပိုများတဲ့ ဖုန်းတစ်ချို့နဲ့ထက်တောင် ပိုကောင်းတဲ့ Haptic မျိုး C3 မှာ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး Volume နဲ့ Power Button တွေကလည်း နဲ့ မနေပဲ နှိပ်ရတာ Clicky ဖြစ်တယ်။ 6.5” Display ပါတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဟာ သေးတယ်လို့မဆိုသာပါဘူး။ သို့ပေမယ့် 20:9 Ratio ဖြစ်နေတာကြောင့်ထင်ရဲ့။ လက်ထဲမှာ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ကိုင်ရအဆင်ပြေနေပြန်ရော။ ဆိုတော့ ခြုံပြောရင် realme C3 ကို ဒီဈေးမှာ ဒီလို Design နဲ့ Quality ကို ချပြနိုင်တာကို ချီးကျူးမိပါတယ်။
Mediatek ဆိုလို့ နှာခေါင်းရှုံ့မသွားပဲနဲ့ဦး။ Helio G70 ဆိုတာ Entry Level အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ SoC ပါ။ realme C3 ဟာလည်း ဒီ SoC နဲ့ ပထမဆုံးပွဲထွက်လာတဲ့ Smartphone ဖစ်နေပြန်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Performance က Snapdragon နဲ့ဆိုရင် SDM 665 နဲ့ 710 ကြားမှာရှိပြီး နောင်တော် realme 5i ထက် နှာတစ်ဖျားသာနေပြန်တယ်။ Antutu Run ကြည့်သလောက် သူ့ Score က 170,000 အထက်မှာရှိပြီး Gaming Performance အရဆိုရင် Snapdragon 400 Seris တွထက် နှစ်ဆနီးနီးပိုကောင်းတဲ့ Result ကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ်။ ဆိုတော့ Entry Level Gaming အတွက် realme C3 ကို လျှော့မတွက်သင့်တဲ့ အနေအထားပါ။
5,000 mAh ဆိုတဲ့ပမာဏက Entry Level Phone တစ်လုံးမှ အားရစရာအနေအထားလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်တာကို Charger လှည့်ကြည့်စရာမလိုပဲ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ သုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာ Smartphone User တိုင်းလိုလို မျှော်လင့်တောင့်တတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ realme C3 ကတော့ ကိုယ်တိုင်အားခံရုံတင်မကပဲ တခြားဖုန်းတွေကိုပဲ Reverse Charging နဲ့ အားပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Micro USB-B ကိုပဲ သုံးထားတာရယ်၊ 10W Charging ပဲ Support တာရယ်ကိုတော့ အားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ်။ Type C မဟုတ်တောင် အနည်းဆုံး 18W လာက်တော့ ရသင့်တယ်မထင်မိဘူးလား?
Entry Phone တစ်လုံးအနေနဲ့ realme C3 ကို အားရမိတဲ့အချက်က Android 10 တစ်ခါတည်းပါလာတာ။ ပိုမိုက်တာက Realme UI နဲ့အတူ Out of the box ပထမဆုံးပါလာတဲ့ Phone ဖြစ်နေတာပါ။ နဂို Color OS ကနေ ခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ realme UI အသစ်မှာ ရိုးရှင်းတဲ့ အမြင်သစ်၊ အသုံးဝင်မယ့် Feature အသစ်တစ်ချို့ကို မြင်လာရတယ်။ ဥပမာ Noti Bar ပုံစံသစ်၊ Screenshot Feature အသစ်တွေ၊ Icon ပုံစံအသစ်တွေနဲ့ Icon Style ပြောင်းနိုင်တာ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
(ကိုယ်တွေတော့ Pebble Style လေး အတော်ကြွေတယ်။) Google App တွေလည်း အတော်များများ တစ်ခါတည်းပါလာပြီးသားဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်။
realme C3 က Camera ၄ လုံး (ကျောဘက် ၃လုံး၊ Selfie ၁ လုံး) နဲ့ပါ။ ကျောဘက်မှာ 12 MP Main Camera ကို 2MP Macro,2MP Depth Sensor နဲ့ တွဲပေးထားတယ်။ Selife က 5MP ပါ။ သူ့မှာ Audio အတွက် 3.5mm Jack ထည့်ပေးထားပြီး Storage အတွက်လည်း သီးသန့် SD Slot ပါပါသေးတယ်။ Fingerprint ကတော့ ဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာပါ။
ဒီတော့ realme C3 က Entry Level မှာ Game ဆော့ဖို့ အဓိကရည်ရွယ်သူတွေ စဉ်းစားသင့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့မြင်တယ်။ နောက်ပြီး ဖုန်းနှစ်လုံးကိုင်တတ်သူတွေအတွက် Battery များများနဲ့ Stand-by အထားခံရုံမကပဲ ကိုယ့် Main Phone ကိုပါ အားပြန်သွင်းပေးနိုင်မယ့် Seconday Phone တစ်လုံးဖြစ်နေတာကလည်း မိုက်နေပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ဖုန်းရဲ့အပြင်ဘက် Design နဲ့ ကိုင်ရတဲ့အရသာကို ဦးစားပေးရွေးချယ်တတ်သူတွေအတွက်ပါ။ ဒီဖုန်းအပေါ် ကိုယ်တွေလို အတွေးတိုက်ဆိုင်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ရှိမလဲ? အတွေးမတူခဲ့ရင်လည်း ခင်များတို့အမြင်၊ ယူဆချက်က ဘယ်လိုလဲဆိုတာ Comment Section မှာ ဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။
Black Shark3ဂိမ်းမင်းဖုန်းကို ကြေညာလိုက်ပြီ
တန်ဖိုးသင့် Xiaomi ဖုန်းတွေအတွက် realme ရဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ်